Nditori mufundisi: Tsotsi | Kwayedza
22 Feb, 2019 - 00:02	 2019-02-21T08:05:34+00:00 2019-02-22T00:05:52+00:00 0 Views
Zolile “Tsotsi” Makeleni
MUTAMBI wemadhirama anozivikanwa — Zolile “Tsotsi” Makeleni — anoti kunyangwe zvazvo vanhu vachimuziva nembiri yekubuda mumafirimu kana madhirama anosanganisira Wenera, akaenda kuchikoro chehufundisi akapasa.
Tsotsi anoti kudai asina kutevera zvishuwo zvemwoyo wake akateerera vabereki vake, kutaura kuno angadai achishumira shoko raMwari.
“Vanhu chimwe chinhu chavasingazive pandiri ndechekuti ini pandakapedza chikoro ndakaenda kunodzidzira chifundisi.
“Vabereki vangu vaida chaizvo kuti ndive mufundisi, ndigotevera matsimba asekuru vangu avo vaive mufundisi kuMethodist. Asi, ini handizvo zvandaida kuita muupenyu, ndaida kufadza vanhu bedzi,” anodaro
Tsotsi akaberekwa mugore ra1988 kuNdola, kuZambia, ndokuzouya kuZimbabwe mugore ra1998 apo aiita Grade 6.
Akadzidza sekondari kuEpworth, muHarare.
Tsotsi anoti kumusha kwavo kuEastern Cape, kuSouth Africa, asi akakurira muno sezvo baba vake vaifamba nekuda kwebasa.
Apo pavainge vachishandira kuZambia, ndipo pavakaroora amai vake.
Tsotsi anogona mitauro inopfuura mipfumbamwe inosanganisira Shona, Ndebele, Chewa neXhosa.
Mushure mekupedza sekondari, Tsotsi akaendeswa kukoreji kunodzidzira hufundisi. Asi paakapedza, muchinda ava kudhaya vhudzi uyu haana kuzoda kuenderera mberi nekuita mufundisi.
Anokurudzira vabereki kuti vasamanikidze vana kuita zvavasingade muupenyu.
“Tinoona muupenyu kuti vabereki vanomanikidza vana kuita zvavasingade, asi zvavanoda ivo kana zvavanenge vakakoniwa kuita ivo muupenyu hwavo. Mukudaro mwana haaite nemwoyo wose manje, zivai kuti mwana anodei momutsigira izvozvo,” anodaro.
Tsotsi akatanga kuita mukurumbira apo akabuda mufirimu rinonzi “Makomborero.”
Asati atanga kuita zvemafirimu nemadhirama, muchinda uyu anoti akashanda kunhepfenyuro dzinosanganisira maCommunity Radio Stations.
Anoti akazozvisiya ndokutanga kudzidzira kubika mafirimu asi chishuwo chake chaive chekuita madhirama. Ndipo paakazowana mukana wekubuda parifimu “Makomborero”.
Asi mukurumbira wake wakazokura paakabuda padhirama reWenera.
Tsotsi anoti pakutanga, aishanda ari soundman mukuitwa kwedhirama iri, asi nerimwe zuva apo vaigadzirira chikamu chechipiri cheWenera, mumwe mutambi haana kuuya iye ndokukumbira kumutsiva.
“Pakutanga, handina kumbofunga kuti ndichange ndiri muWenera nekuti ndaishanda ndiri sound guy pachikamu chekutanga asi pataigadzirira chikamu chechipiri, mumwe mu’face’ aifanirwa kuuya kuzopinda mudhirama iri haana kuzobatika ini ndikanzi ndimutsive. Ndiro zuva Tsotsi raakazvarwa uye kubva musi uyu handina kuzotarira shure,” anodaro Tsotsi, uyo muhurukuro ino aisanganisa chiShona nemutauro wevechidiki vemazuva ano wechibhende.
Kusvika pari zvino, Tsotsi akwanisa kubuda mumadhirama nemafirimu anosanganisira Makomborero, Revelations, Wenera, Bhachi, Coockoff, The Tree, Betrayal neThandi’s Diary.
Vanhu vazhinji vanoziva Tsotsi aine vhudzi jena. Anoti vhudzi rake akarishandura ruvara paakabva kuSouth Africa uko ainge aenda kumumwe musangano apo vainge vambomira kuita dhirama reWenera.
“Pandaive kuSouth Africa, vanhu ikoko vaiti ndakafanana naPresley Chwenyagae uyo akabuda pafirimu rinonzi Tsotsi rekuSouth Africa. Saka ndakazosangana naSomizi wekuSouth Africa uyo akanditi kana ndichida kuti vanhu vandione kuti ndinoita zvemadhirama kubva kuZimbabwe, ndinofanirwa kuve nechinhu chiri pandiri chinoshamisa uye chisiri pane vamwe.
“Saka pandakadzoka kuno, ndakasvika ndokuchinja ruvara rwevhudzi rangu. Pakutanga, zvakambonetsa vanhu, vamwe vachindiseka, vamwe vachishora asi vakasvika pakuzvitambira uye ndizvo zvavave kunyanya kutoda pandiri. Ndatova nemakore matatu ndine vhudzi iri,” anodaro.
Tsotsi munhu anoda zvekutaura nekugara ari pavanhu.
Anofarira nhabvu uye mutsigiri wechikwata cheCAPS United zvekuti anochitevera kwose kwachinoenda kunotamba.
Tsotsi haasati aroora “asi ndicharoora hangu nerimwe zuva”.
Anoti kuburikidza nemadhirama, ave neizwi rekuti kana akataura, vanhu vanomuterera vonzwa pfungwa dzake.
Kunyangwe achizivikanwa saTsotsi, anoti muupenyu hwake haasi tsotsi kana kuti mbavha uye “ndinoshanda nevanhu nemazvo, ndichivasiya vakagudzikana nemadhiri atinenge tapinda tose”.
Ndiwo mapfekero angu18 Oct, 2019
Tsvarakadenga dzokwikwidza18 Oct, 2019
Eke hutu nemubairo weBig Brother Naija11 Oct, 2019